BAARLAMANKA OROMADA OO LAGAGA DOODAY LIYUU BOOLISKA DDSI Halka baarlamaanka Jigjiggana Dhaanto iyo Tumasho Looga Taag waayey.
ADAMA – Dood kulul oo ku saabsan wax ay maamulka Oramadu ugu yeedheen duulanka ciidanka gaarka ah ee DDSI, Liyu boolis, ayaa Khamiistii la soo dhaafay ka dhacday baarlamanka Oromada. Dooda oo si toos ah markii hore looga sii daaye TV-ga ismaamulka Oromada ayaa laga saaray hawada kadib markii ay sirdoonka Itoobiya amar degdeg ah bixiyeen.
Doodaha baarlamaanka Oromada ayaa daba-socda dagaalo soo noq-noqday oo dhawrkii bilood ee la soo dhaafay ka dhacay dhulka soohdinta ah ee kala qaybiya labada maamul.
Madaxa xidhiidhka ee Oromiya, Addisu Araga, ayaa laanta Oromada VOA-da u sheegay in 14 degmo oo ku yaal xadka ay Liyu boolisku ku soo duuleen iyaga oo halkaas khasaare ka geystay. Addisu ayaa ujeedada dullanka ku tilmaamay dhul balaadhsi uu wado kililka Soomaalida iyo in la boobo hantida Oromada isaga oo Liyuga ku eedeye inya dhaceen xoolo tiro badan.
Waxaa jira dareen guud oo ay qabaan xubno badan oo ku jira baarlmaanka Oromada kuwaas oo tuhunsan in TPLF dabada ka wado colaada labada shacab ee Oromada iyo Soomaalida.
Dawalada ismaamulka Soomaalida ayaan marna soo qaadin colaada ciidankeeda lagu eedeyanayo, balse madaxa xidhiidhka Oramada ayaa sheegay in DDSI oo ka helay warar is-burinaya. Addisu ayaa xusay in maamulka Soomalidu sheegeen in ciidankoodu is difaacayo oo la soo weeraray, halka aya marar kale sheegeen inayna warba ka ahayn wax colaad ah oo socota iyo ciddda wada toona.
Waxaa jira warar aan si madaxbanaan loo xaqiijin karin oo sheegaya in xukuumada federaalka ah ku canaanatay DDSI falalka Liyu booliska taaso dhalisay in maamulka Jigjiga u diro Addis Ababa odayaal gaadhaya 60 oo ka hadla arrimaha xadka iyo xurgufaha ka jira. Masuuliyiinta DDSI ayaa ku doodeysa in colaadu salka ku hayso muran ka dhashay dhulka oo u dhaxeysa labada shacab ee xadka wada degga.
Mareegta wararka ee Opride.com, oo maqaal dheer ka qortay colaada xadka iyo Liyu booliska, ayaa tibaaxday in dad shacab Oromo ah oo deggan meelaha dagaalku ka dhacay u xaqiijiyeen in ciidamada Liyuuga oo ku qalabaysan gadiid iyo hub ay cagta mariyeen dadkii shacabka ahaa iyaga oo khasaare xoog leh u geystay. Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Oromada xukuumadu horey hubkii uga ururisay oo ayna is difaaci karin.
Shabakada ayaa ku eedeesay dawlada, gaar ahaan TPLF, inay ka danbeyso colaada si ay u tijaabiso dulqaadka Oromada oo ahayd xudunta mudaharaadyada lagag soo horjeedo xukuumada. Warbixinta ayaa intaa ku dartay in ujjeda colaadu tahay si meesha looga saaro nabad-ku-wada noolaanta Oromada iyo Soomaalida.
Mareegta ayaa xustay in qurbajoogta Oromadu aad uga waalsacn yihiin xaalada xadka iyo dagaalada ay soo qaadeen Liyu boolisku.
Doodi baarlamaanka Oromiya ka dhacday Khamiistii, oo ahayd mid aad u qadhaadh islamarkaana sirdoonku Itoobiya ka joojieen TV-ga Oromada, ayaa qaybo ka mid ah lagu faafiye baraha bulshada ee internet-ka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/Oromiya.png 225 225 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-06 10:09:142017-03-06 10:09:14
Daawo Sababta Tv-ga Universal Looga Mabnuucay Degaanada Maamulka Puntland Djibouti, pays de toutes les convoitises